RASMI: Giampiero Ventura oo loo magacaabay tababaraha cusub ee xulka qaranka Talyaaniga – Gool FM
(Italy) 07 Juunyo 2016 – Macallin Giampiero Ventura ayaa loo magacaabay tababaraha cusub ee xulka qaranka Talyaaniga, isagoo xilkaas la wareegi doona kaddib marka uu soo idlaado tartanka qarammada Yurub ee Euro 2016, sida uu xaqiijiyey xiriirka kubadda cagta Talyaaniga.
Hadda waxaa xulka qaranka Talyaaniga tartanka qaramada Yurub ee ka dhacaya Waddanka Faransiiska ku hoggaamin doona tababare Antonio Conte, isagoo xilkaas isaga dagi doono kaddib tartanka Euro 2016, waxaana uu ku biiri doonaa kooxda reer England ee Chelsea.
Ventura ayaa Conte ka bedeli doona hoggaanka xulka Azzurri, iyadoo 68-sano jirkaan soo hoggaamiyey kooxda Torino oo uu shaqada kooxdaas ka tagay dhammaadkii xilli ciyaareedkan.
Tababarihii hore ee kooxda Torino, kaasoo kooxdaas tababare u ahaa tan iyo bishii June 2011 ayaa xulka qaranka Talyaaniga ku hoggaamin doona koobka Aduunka ee 2018 lagu qaban doono dalka Ruushka.
Sidoo kale tababare Ventura ayaa soo hoggaamiyey kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Bari, Pisa, Verona, Messina, Napoli, Cagliari, Udinese iyo Sampdoria.